Murazora जस्तै दृष्टि,: ट्यांक को विश्व
आज हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी ट्यांक को खेल विश्व लागि भनेर Murazora रूपमा दृष्टि प्राप्त गर्न। हामी बहु-प्रयोगकर्ता परियोजना, ठाउँ लिन्छ जो अनलाइन र वास्तविक समयमा एक प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दै छन्। ट्यांक को विश्व - यो ट्यांक सिम्युलेटर।
कि Murazora रूपमा दृष्टि प्राप्त गर्न, खेल को आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्। उपयुक्त खण्ड खोल्नुहोस्। हामी आवश्यक स्कोप पाउन। यसको बारेमा पूर्ण जानकारी पृष्ठ खोल्न। विवरण र फोटो थाह प्राप्त गर्नुहोस्, र त्यसपछि बटन क्लिक गर्नुहोस् "डाउनलोड गर्नुहोस्"। यो अभ्यास बाहेक कस्तो देखिन्छ हेर्न क्रममा, प्रशिक्षण कोठा जानुहोस्।
त्यसैले हामी प्रशिक्षण जमीन मा हो, र तपाईं हामी एक धेरै जीवन्त दृष्टि पायो भनेर हेर्न सक्छन्। बाँकी यो RECHARGE सूचक प्रर्दशन गर्दछ। त्यहाँ एक काउन्टडाउन घडी छ। साथै, हामी अन्तिम चार्ज समय हेर्न हुनेछ। कुनै कम महत्त्वपूर्ण सूचक सही पक्षमा प्रदर्शन। त्यहाँ धेरै बारहरू को भर्न छन्। एक केन्द्र बिन्दु, मिश्रण, क्रसहेयर: यो दृष्टि को मानक प्रकार देखाउँछ। यो प्याकेज बाहेक जो देखि प्रत्येक खेलाडी उपयुक्त एक चयन गर्न सक्नुहुन्छ धेरै विकल्पहरू छन्। अब के sniper मोडमा Murazora जस्तै दृष्टि हेर्न दिनुहोस्। लगभग सबै सुविधाहरू माथि वर्णन ती समान छन्। हामी देख्न: overcharging, को गोले को संख्या, र थप। यहाँ र rangefinder प्रदान। यो गन्तव्यमा दूरी प्रदर्शन Hovering। दृष्टि, Murazora जस्तै धेरै विकल्पहरू छन्। हामी आर्केड खेल मोड तिनीहरूलाई बारी। रेडियल तेर्सो धर्काहरू एक सूचक छनौट गर्दा गायब। केन्द्रीय मार्कर एक विस्तृत विविधता मा प्रतिनिधित्व गर्दै छन्, र तिनीहरूले पर्याप्त देखिने छन्। तपाईं पनि सेटिङ sniper स्कोप ध्यान गर्नुपर्छ।
यसलाई कसरी हामीलाई आवश्यक घटक स्थापना गर्न विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, यो पीसी डाउनलोड गरिएको छ। लगभग कुनै पनि अभिलेखक फिट हुनेछ प्याकेज अनप्याक गर्न। ग्राहक खेल फोल्डरको सामग्रीहरू सार्नुहोस्। यो नै नाम को सूची मा अवस्थित सामाग्री को प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। तपाईं ट्यांक को विश्व अन्य ठाँउहरु रुचि हो भने, तपाईंले Amway ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यो धेरै सरल छ। बाँया मा cooldown प्रदर्शित छ। पनि गोले को बाँकी नम्बर देखाउँछ। पूर्ण जानकारी प्रकार सर्कल। sniper मा मोड घडी पुन: लोड गायब। माथिल्लो पट्टी जूम अनुपात प्रदर्शित छ। हाम्रो वर्तमान हतियार पनि देखिने छ।
खेल विवरण "दाढी वाला"। खेल मा एक चिन्ह "दाढी वाला" र अन्य खोजहरू कसरी पत्ता लगाउन
खेल "Stalker: Chernobyl को छाया" - को लगे वजन बढाउन कसरी
"100 1": के खाट मुनि लुकाउने छ
स्थायी स्मृति जानकारी भण्डारण लागि प्रयोग गरिन्छ
कल्याण गतिविधि - यो के हो? विज्ञान, विशेषता
राम्रो नमस्ते-Fi सिस्टम कसरी चयन गर्न: अवलोकन, सुविधा र समीक्षा
सबैभन्दा जवान अपराधीहरूले। तिनीहरू को हुन्?
बश (पेचकस) - सहायक मास्टर
ई-कमर्स - यो के हो। ई-कमर्स भागीदार नेटवर्क - संबद्ध कार्यक्रम सबै भन्दा ठूलो अनलाइन रिटेलर
"Mexicor" र "Meksidol" - फरक के? विवरण तयारी निर्देश पुस्तिका